Insizakalo ye-YouTube TV inyusa amanani ngemuva kokungeza iziteshi ezintsha | Ngivela kwa-mac
Insizakalo ye-YouTube TV inyusa amanani ngemuva kokungeza iziteshi ezintsha
Ikhebula yinto yesikhathi esedlule. Okungenani yilokho okwakucatshangwa iGoogle lapho iqala ukudala insizakalo yethelevishini ye-Intanethi, lapho singaba khona neziteshi zethu zezemidlalo esizithandayo, uchungechunge, ama-movie, izindaba ... ezandleni zegundane ngohlelo lokusebenza lwe-YouTube TV, insizakalo esekuphele amasonto ambalwa itholakala ngendlela yesicelo se-Apple TV.
Yize ingakatholakali kuyo yonke indawo yaseMelika, amanye amahemuhemu athi iGoogle ibingakwazi nweba le nsizakalo iye nakwamanye amazwe, ikakhulukazi i-Europe, ukufinyelela esivumelwaneni neziteshi ezinkulu zokukhokha futhi ngaleyo ndlela inikeze ukusakazwa kwayo ngenkokhelo yanyanga zonke, efanayo naleyo enikeza yona e-United States.
Kepha okwamanje, le sevisi itholakala kuphela endaweni yaseMelika Futhi njengoba izinyanga ziqhubeka, i-YouTube ivala izivumelwano ezintsha zokufaka iziteshi ezintsha kulezo esezivele zinikeza zona ngo- $ 35. Ezinye zeziteshi zakamuva esevele zitholakala nge-YouTube TV yi-CNN, i-Adult Swin, i-TNT, i-Turner Classic Movies neCartoon Network, ezinye iziteshi ezizokwazi ukuzijabulela ndawonye zizosiphoqa ukuthi sikhokhe amadola ama-5 ngaphezulu.
Kulawo madola ama-5 ngaphezulu kufanele sengeze Ama-dollar angama-40 ngenyanga ukuthi insizakalo ibiza, ukukhushulwa kwamadola ama-5 maqondana nentengo ababhalisile abazoqhubeka bayikhokhe kuze kube ngumashi olandelayo 13, usuku okuzonyuselwa ngalo imali ngokusemthethweni. Ezinyangeni ezizayo, i-YouTube TV izophinda inikeze imidlalo ye-NBA ne-MLB, ngezindleko ezingezwe enkokhelweni yokuxhuma yamanje.
I-YouTube TV ingene emakethe ukuqhudelana neHulu neSony PlayStation Vue, insizakalo enentengo efanayo kakhulu ngokuya kwemali nangamaphakeji wesiteshi angeziwe kusevisi ye-Google. Kepha akuzona ukuphela kwezinketho, ngoba singaphinda siqashe i-Sling TV, insizakalo enikeza ukufinyelela kwinani elikhulu leziteshi ngo- $ 20 kuphela ngenyanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Insizakalo ye-YouTube TV inyusa amanani ngemuva kokungeza iziteshi ezintsha
Ungayifaka kanjani iphasiwedi ye-firmware ku-single-use Mac
I-Apple iqala ukuthengisa izinhlobo ezenziwe kabusha ze-Apple Watch Series 3